Kungani iBrazil ibaluleke kangaka ezimakethe? | Ezezimali Zomnotho
Kungani iBrazil ibaluleke kangaka ezimakethe?
Ngalezi zinsuku okunye okuzogxilwa ezimakethe zezezimali yiBrazil ngenxa yokhetho lukamongameli olubanjelwe emnothweni wokuqala weLatin America. Ukubaluleka kwaleli lizwe elikhulu kungenxa yesisindo esinalo njengenye yezimakethe ezisakhasayo emhlabeni nokuthi lingakwazi kungcolisa eminye iminotho ngokubaluleka okukhethekile, njengasendabeni ethile ye-Argentina. Lesi ngesinye sezizathu esenza amehlo abatshalizimali abheke lesi sizwe sabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-180.000.
Ukhetho luveze ukuthi ozongenela ukhetho lobuzwe ufika ekubuyeni enenzuzo enkulu kunembangi yakhe yezepolitiki. Ngoba impela, umgqugquzeli ongakwesokudla kakhulu, UJair Bolsonaro, ungeze u-46,03% wamavoti asemthethweni okhethweni olwenziwe ngeSonto, okumbeka esikhundleni sokuba yintandokazi yomzuliswano wesibili wokhetho ozoba ngo-Okthoba 28. Ngokuphikisana nommeleli ongakwesobunxele uFernando Haddad, owayeyiMeya yaseSao Paulo kanye nomqokelwa iqembu le-leftist Workers Party (PT), eliholwa nguLula da Silva, othole ngaphezu kuka-28% kuphela.
Ukusabela kwezimakethe kwehlisela ukunqoba kosopolitiki ohlangothini lwesokunene ngoba njengoba ukuvota kukhulisa umehluko ngenhloso, imakethe yamasheya yaseBrazil yakhuphuka, noma ngabe ukuqwala kwentaba okungaba ngu-3% ezinsukwini ezandulela ukuthuthukiswa kwalolu khetho olubalulekile lukamongameli. Lokhu ngokwenza kusho ukuthi imakethe yamasheya yaseBrazil ibheja ekungeneleni ukhetho kukaJair Bolsonaro, ilinganisela ukuthi kungenzeka ukuthi ikhuthaze izinyathelo ezilindelwe ngabasebenzeli bezezimali bezwe laseRio de Janeiro. Ibhekene nokwesaba okuthile ngezinhlelo zezomnotho imbangi eyethule ngazo kulolu khetho.
1 IBrazil: ukuthambekela okuphezulu emakethe yamasheya
2 Ubukhona bezinkampani zaseSpain
3 Isisindo esithile somnotho waseBrazil
4 Ukuvela kwamazwe omhlaba
5 Ngena ngezimali ezihlangene
6 Winks esikhundleni sikaBolsonaro
IBrazil: ukuthambekela okuphezulu emakethe yamasheya
Inkomba yamasheya efanelekile ibingelele ukunqoba kosopolitiki ongakwesokudla ngokwenyuka okukhulu. Ngalo mqondo, ngemuva kokunqoba kukaJair Bolsonaro emzuliswaneni wokuqala wokhetho ngeSonto, iSão Paulo Stock Exchange ivule lo Msombuluko ngokukhuphuka okukhulu kwama-6%: emizuzwini yokuqala engama-20 yokusebenza, i Inkomba ye-Bovespa ibimiswe kuze kufike kumaphoyinti angama-87.262. Enye yezinkomba ezihamba phambili emhlabeni futhi ngokungafani nezimakethe zamasheya ezwekazini elidala ezavunyelwa ukuthwalwa ngumkhuba wokuthengisa osindwe yizinyathelo zezomnotho ezithathwe e-Italy.
Inkomba yaseBrazil iBovespa futhi ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu futhi yakhiwe yizinkampani ezingama-50 ezibhalwe ku-Sao Paulo Stock Exchange ebalulekile. Kunoma ikuphi, le nkomba yakhiwe ngezihloko zezinkampani ezimele I-80% yevolumu ethengisiwe ezinyangeni eziyi-12 ezedlule. Kubuyekezwa njalo ngekota, ukugcina izinga lokumelwa kwawo wonke amasheya athengiswa emakethe. Ukuthi kube ngesinye sezindawo okusetshenzelwa kuzo kubatshalizimali abancane nabaphakathi kule ndawo enkulu yejografi engaphesheya kwe-Atlantic.
Ubukhona bezinkampani zaseSpain
Esinye sezisusa zokulandela imakethe yamasheya eRio de Janeiro ngalezi zinsuku kungenxa yokufakwa okuqinile kwezinkampani zaseSpain kuleli. Vele, akunakukhohlakala ukuthi ezinye zezinkampani ezinkulu, ngokwesibonelo, I-BBVA, iSantander noma iTelefonica, sekuphele iminyaka eminingi isebenza. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi abatshalizimali babheke kakhulu ukuvela kweBvespa nakho konke okwenzekayo kulolu khetho olunqunyiwe olwenzeka e-Argentina. Akumangalisi ukuthi kuningi okusengozini kulezi zinsuku.
Hhayi, akukho okungaphansi kwenani eliphelele le- Izinkampani ezingama-22 zemakethe yamasheya ekhethiwe yaseSpain zimelwe eBrazil, ngenani elilinganisiwe lemali engaphezu kwezigidi ezingama-20.000 XNUMX zama-euro. Phakathi kwabo kukhona iBanco Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Endesa, ACS, Ferrovial, Acciona, Mapfre, Amadeus, Dia, Inditex, Indra, Meliá, Naturgy, Técnicas Reunidas, IAG, Viscofan, Siemens Gamesa, Enagas, Cie Automotive and Grifols. Lokho wukuthi, ezinye zezinsimbi ezisindayo ze-Ibex 35 futhi kunoma yikuphi, izinkampani eziningi ezibaluleke kakhulu ezweni. ngakho-ke, kungaphezu kwesizathu esanele sokubheka iBrazil kulezi zinsuku.
Isisindo esithile somnotho waseBrazil
IBrazil, umnotho omkhulu kunayo yonke eLatin America (eno-40% we-GDP) kanye nabantu abaningi (izakhamizi eziyizigidi ezingama-192) iyaqhubeka nokuvela kahle, yize kunenkinga yezomnotho esalokhu igcwele. Ngakho-ke, izimali zaseBrazil zikhombisile mkhuba ngokucacile we-bearish eminyakeni yakamuva. Ngokuncipha kwangaphakathi kusondele kakhulu kuma-20%. Kuze kube seqophelweni lokuthi ingxenye enhle yabasebenzeli bezezimali idikibalise amaklayenti abo ekwenzeni izimali zabo kuleli.
Manje ngemuva kokhetho, kusazobonakala ukuthi kuzoba yini Yiqiniso ukuthi izimali zizothatha carioca noma uma konke kuzoqhubeka kuze kube manje. Kunoma ikuphi, kuzodingeka ukuthi wazi kakhulu ukuthi yiluphi uhlelo lwezomnotho umongameli omusha wezwe azolungenisa. Kuzoba yisibonakaliso esinenhloso enkulu yokuqondiswa yimakethe yamasheya okuzothatha kusukela manje kuqhubeke. Ukuthola ukuthi yisikhathi sokungena emakethe yamasheya noma ngokuphambene nalokho, kufanele uhlale njengakuqala. Lokho ukusho, ezikhundleni zokukhishwa kwemali ephelele ukwehlisa izingozi ezingadingekile kutshalo-mali.
Ukuvela kwamazwe omhlaba
IBrazil ingomunye wabamele kakhulu iminotho esakhulayo emhlabeni wonke kanye nemali yayo, okungokoqobo, ilandelwa usuku nosuku ngabahwebi bamazwe omhlaba ngokuguquguquka kwayo okungajwayelekile. Ngeziphambano eziveza umehluko omkhulu kakhulu phakathi kwezintengo zazo eziphakeme nezincane. Lapho ungathola khona imali eningi, kepha ngesizathu esifanayo izingozi ziphezulu kakhulu ukuthi ungalahlekelwa yimali eningi etshaliwe. Ikakhulukazi ngezinguquko ezenziwe nsuku zonke ngemali yesethenjwa, eyiDola laseMelika.
Kodwa-ke, enye yezinzuzo ezinhle kakhulu ze-stock stock yaseBrazil, i-Bovespa, ukuthi inezinto eziningi ukugijima kwe-bullish lapho ukuthambekela kuguquka. Amathuba ayo makhulu kakhulu ngoba angaphinde alinganisele ngaphezu kwamanye ama-indices wamazwe omhlaba, kufaka phakathi neSpanish. Kungaphezu kwesizathu esanele sokubaluleka kokungena ezikhundleni kule makethe yezimali ebalulekile kusukela kulezi zikhathi eziqondile. Yize uhlola ubungozi obunalezi zinhlobo zokusebenza.
Ngena ngezimali ezihlangene
Kunoma ikuphi, isu lokuvikela izintshisekelo zokutshalwa kwezimali okuncane naphakathi nendawo lisuselwa kunkontileka yezimali zokutshala imali. kumasheya asekelwe kulesi sikwele samazwe omhlaba. Kunemali eningi ekhona kuleli zwe laseMelika futhi ngale ndlela ungakhetha phakathi kwezindlela ezahlukahlukene zokuphatha imali yakho. Ngoba awukwazi ukukhohlwa ngalesi sikhathi ukuthi lesi sigaba semikhiqizo yezezimali sihlanganisa izimpahla eziningana zezimali ukuvikela imali yabahlanganyeli. Lokho wukuthi, awuzivezi ngqo emakethe yamasheya yaseBrazil njengoba ungenza ngokuthengwa nokuthengiswa kwamasheya emakethe yamasheya.
Ngale ndlela, ungahlanganisa utshalomali lwakho emalini yaseBrazil nezinye izimakethe zamasheya, kokubili endaweni yaseMelika naphakathi kwezwekazi elidala. Yilokhu akubiza ngokutshala imali okuhlukahlukene esikhundleni sokonga yonke imali oyongile kubhasikidi ofanayo wokutshala imali. Ngaphezu kwalokho, kunenzuzo yokuthi awudingi ukuklama isu lokutshala imali. Uma kungenjalo, kunalokho, kuzothunyelwa umphathi onolwazi olunzulu ngalolu hlobo lokusebenza ezimakethe zezimali. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kwezobuchwepheshe kuze kube yilapho ukwazi khona ukusuka ekubukeni okuyisisekelo.
Winks esikhundleni sikaBolsonaro
Ukuze wazi ukuthi ungayihambisa kanjani iminyakazo yakho kusukela manje kuqhubeke, ngeke ube nenye indlela ngaphandle kokuthi ube nezinye izinkinobho ezilethwa yimakethe yezimali yaseBrazil. Okunye okubaluleke kakhulu ukuthi isigaba sezebhizinisi saseBrazil kanye nezicukuthwane kwezomnotho buthule bakhuthaza umuntu ozongenela ukhetho lobumengameli kwesokudla uJair Bolsonaro ukuthi anqobe unomphela ukhetho lobumengameli eBrazil. Akumangalisi ukuthi okunye ukwesaba okukhulu kwale mikhakha ebalulekile ukuthi washiya uhulumeni kuya emnothweni omkhulu kunayo yonke eLatin America.
Lesi sici sisebenza ngokulingana kwezimali kuleli ezonyuka kakhulu emasontweni azayo futhi mhlawumbe ngisho nasezinyangeni. Kuyinto ongayisebenzisa ngokunenzuzo ukwenza ukonga kwakho kube nenzuzo ngendlela eyanelisa kakhulu izintshisekelo zakho. Yize kunciphisa ubungozi ngokusebenza kwemali engekho ngokweqile. Kumele nje utshale imali kuze kufike kuma-20% enhlokodolobha etholakalayo ukwenza izimali zalezi zici. Ngakolunye uhlangothi, kungakuhle kakhulu ukuthi ubeke i-oda lomkhawulo wokulahlekelwa ukuze uvikele izikhundla zakho kulokhu kushintshana okukhethekile nangokuphikisana nalokho okungenzeka emasontweni azayo.
Enye indlela ongayisebenzisa ukukhetha izinkampani ezinikeza ukuphepha okwengeziwe emigodini yazo yebhizinisi. Ungalokothi usebenzise amamodeli anolaka kakhulu angenza ukwehla okukhulu ngamanani abo. Njengoba ungenza ekusebenzeni ezimakethe zikazwelonke. Ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokwehluka maqondana nalesi sici esibalulekile emkhakheni wokutshala imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Kungani iBrazil ibaluleke kangaka ezimakethe?
Yimiphi imikhiqizo evumela ukwehlukanisa utshalomali?
Ukuqasha isikweletu sekubiza kakhulu: inzalo iyakhuphuka